Unicef: entanina hiaro ny zon’ny ankizy ireo kandida ho filoham-pirenena | NewsMada
Unicef: entanina hiaro ny zon’ny ankizy ireo kandida ho filoham-pirenena
Nandefa taratasy ho an’ireo kandida ho filoham-pirenena rehetra ny Unicef Madagasikara, ny herinandro lasa teo. Votoatin’io taratasy io ny fampirisihina ireo kandida rehetra tsy ankanavaka hanolotra fandaharanasa hampiroboroboana ny zon’ny ankizy.
Anisan’ny voarakitra ao anatin’izany taratasy izany ny tokony hijeren’ireo kandida ny sehatry ny fahasalaman’ny ankizy, ny fiarovana azy amin’ny herisetra, ny fampianarana any an-dakilasy ary ny hanome ireo ankizy ny tolotra tsara hahatafitany amin’ny fiainany ao anatin’ny firenena milamina.
Firenena manankarena i Madagasikara, na ny harena an-kibon’ny tany izany, na ny fambolena sy ny fiompiana. Fa anisan’ny harena indrindra koa ny fananana ankizy betsaka izay tompon’ny ampitso raha voavolavola tsara.
Anisan’ny mampijaly ny ankizy, indrindra koa ny tsy fahazoana rano fisotro madio miteraka aretin-kibo ary mitarika hatramin’ny fahafatesana mihitsy aza. Eo koa ny tsy fanjarian-tsakafo maheryvaika izay mahakasika ny 47%-n’ny ankizy malagasy ary manakana ny fitomboan’izy ireo ara-dalàna, na ara-batana, na ara-tsaina.
Matetika lasibatry ny herisetra sy ny fanararaotana tsy ara-drariny amin’ny sehatra maro ihany koa ny ankizy malagasy. Tanora iray amin’ny enina no tratran’ny fanolanana. 90%-n’ny ankizy no voasazy ara-batana any an-tokantrano ka misy fiantraikany amin’ny fivelarany izany.
Itadiavana vahaolana amin’ireo kandida mpilatsaka ho filoham-pirenena avokoa ireo. Hatreto, mbola ny kandida Rabary Paul no namaly ny taratasin’ny Unicef ary nilaza am-panetren-tena ny fahavononany hiaro ny zon’ny ankizy. Nilaza koa ity kandida ity fa voarakitra ao anatin’ny fandaharanasany ny fampianarana ny ankizy sy ny fiarovana ny zon’izy ireo.